အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် လှပလွန်းနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးကြား နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံလေးများ – Shwe Sar
အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် လှပလွန်းနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးကြား နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံလေးများ
ပုံလေး တွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှား တစ် ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ မခို့ တရို့ ပုံရိပ် လေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့် ရှိ တဲ့ ပုံလေး ကို တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ၊၊ Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန် လည် မျှဝေပေး လိုက် တယ် နော် ။
မြင် သူ တိုင်းငေး လောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှား ကို သိကြ မယ် ထင် ပါတယ် နော် ။ မော်ဒယ်လ်လော က ကိုဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပါ တယ် … . ယောကျာ်း လေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေး မှု ရရှိထား တာပါ … .
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေ ပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိတာ တွေ့ရ ပါတယ် … .
ပုံလေး တှေ တိုငျး မှာ မျောဒယျလျ L လဈရှား တဈ ယောကျ ဆှဲဆောငျ မှု ရှိရှိ နဲ့ လနျးလှနျး နတော လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ သူမ က တော့ မခို့ တရို့ ပုံရိပျ လေး နဲ့ ဆှဲဆောငျမှု အပွညျ့ ရှိ တဲ့ ပုံလေး ကို တငျပေး လာတာပဲ ဖွဈပါ တယျ ၊၊ Lလဈရှား ရဲ့ အလှ ပုံရိပျလေးတှေ ကို ပရိတျသတျ တှေ အတှကျ ပွနျ လညျ မြှဝပေေး လိုကျ တယျ နျော ။
မွငျ သူ တိုငျးငေး လောကျ တဲ့ အမိုကျ စား ခန်ဓာကိုယျ ကောကျ ကွောငျး အလှ ကို ပိုငျဆိုငျ ထား တဲ့ မျောဒယျလျ L လဈရှား ကို သိကွ မယျ ထငျ ပါတယျ နျော ။ မျောဒယျလျလော က ကိုဝငျရောကျ တာ မကွာသေး ပမေယျ့ ပရိသတျ အမြား အပွား ရဲ့အားပေး ဝနျးရံမှု ကို တဖွညျးဖွညျး ရရှိ လာတဲ့ မျောဒယျလျ ဖွဈပါ တယျ … . ယောကျြား လေး ပရိသတျတှေ ရဲ့ ဝနျးရံ အားပေး မှု ရရှိထား တာပါ … .
သူမ ရဲ့ ဆကျဆီ ကပြွီး အမိုကျ စား ပုံတှေ နဲ့ ညို့ အား ပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျ နိုငျ သူလေး ဖွဈတာ ကွောငျ့ လကျရှိ ဖဘှေ့တျစာ မကျြနှာ မှာ ရေ ပနျးစား လူကွိုကျ မြားကာ ပုရိသ တှေ ဝနျးရံ နကွေ တာ လညျး ဖွဈ ပါ တယျ ။ သူမ ရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျတှေ ကို လူမှု ကှနျယကျ ဖဘှေ့တျ ပျေါတှငျ အမြား ဆုံး တငျလေ့ ရှိတာ တှရေ့ ပါတယျ … .
Previous post ‘ကိုကိုရေ လာပါတော့ ဘေဘီ မျှော်လှပေါ့’ ဆိုပြီး အလန်းစား ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
Next post ပုရိသတွေ ရင်ဖိုသွားအောင် အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး တင်ပေး လိုက်တဲ့ မမသင်ဇာ